Ukuphupha malunga ne-DDR ▷ ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
IRiphabhlikhi yaseDemocratic Republic, ebizwa ngokuba yi "GDR" ngamafutshane, yayikhona phakathi kowe-1949 nowe-1990. Eli lizwe lavela kulwahlulo lweJamani emva kowe-1945 lwaza lwaphuma lwaya kuhlala eSoviet.
Esi yayisesona sizathu sokuba i-GDR ixhomekeke kakhulu kwiSoviet Union kwiminyaka yayo engama-40 ikhona. I-GDR yazibona "njengabasebenzi bezentlalo kunye nabalimi," kodwa inkqubo yelizwe ayikhange ibhenele kubo bonke abemi. Kungenxa yoko le nto intshukumo yokufudukela kwelinye ilizwe esoyikisayo yema ngxi ngo-1961 xa kwakusakhiwa udonga lwaseBerlin. IRiphabliki yeDemokhrasi yaseJamani ekugqibeleni yafikelela esiphelweni ngohlaziyo lwabemi, olwaphela ngokuwa kodonga ngoNovemba 9, 1989. Oku kukhokelele ekumanyaneni kwakhona kweJamani, nto leyo eyazisa imiceli mngeni emitsha "kwiWessis" nakwi "Ossis" ".
1 Uphawu lwephupha «DDR» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «RDA» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «DDR» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «DDR» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubona uphawu lwephupha "RDA" ngokunxulumene nekhadi elidala ephupheni lakho, kuya kufuneka, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, jonga ezinye ze elidlulileyo khumbula. Kuba le nkcukacha ibalulekile kwimeko yangoku yobomi bephupha. Ukuba olu phawu lwephupha lubonakala kulowo wayesakuba ngummi we-GDR, lunokubhekisa kumaphupha alangazelela amaxesha akudala. Oku kubonakala kulula ukulala kwimeko yakho yangoku, nangona kungenjalo kwakungekho kwaphela. Ukuba iphupha loyika ukuhlala kwi-GDR ephupheni lakho, amava athile adlulileyo ayakoyikisa el mundo yomlindo. Awukayiqhubekisi ngokupheleleyo.
Ukuba umntu ophuphayo ubona udonga ephupheni, olwahlula iBerlin ngexesha le-GDR, uye wabona umqobo ebomini bakhe. Kwakhona, kufanele ukuba ibe nguye Umnqweno wenkululeko kwihlabathi elivukayo. Unokuziva unyanzelekile kubomi bakho bangoku kwaye ulangazelele inkululeko engakumbi kunye nokuzimisela. Ukuwela umda ovaliweyo we-GDR njengophawu lwephupha kubonwa njengophawu lwezithintelo kumgangatho wokuphila okwangoku ekufuneka unyamezelwe kwihlabathi elivukayo. Umda ovulekileyo we-GDR, onokuwela ephupheni, uhlala ufuzisela utshintsho oluya kwi isigaba esitsha sobomi ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «RDA» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, udonga lwe-RDA njengophawu lwephupha lubonisa umgama amaphupha awakha phakathi kwakhe nabanye abantu. Oku kunokwenzeka zombini ngokungazi kunye nokungazi kwilizwe elivukayo. Ukuba oku kuyenzeka ngokuzazi, umphuphi akafuni ukuzityhila ngokupheleleyo ebomini bokuvuka.
Ukuba iphupha liziva lizivaleleke emva kodonga lwe-RDA ephupheni, ngokwenkcazo yeli phupha, ufumana ireferensi uloyiko y duda. Ukuba iphupha alikwazi ukuwela umda phakathi kweMpuma neNtshona Jamani ephupheni lakho, kuya kufuneka uqaphele ukuba awukakulungeli isigaba esitsha sobomi. Phakathi kwezinye izinto, izizathu zisengaphakathi kuyo. Kwelinye icala, oku kunokubonisa iimpembelelo zangaphandle ezifuna ukuyeka ukulala.
Uphawu lwephupha «DDR» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kuyabona kwisimboli yamaphupha "i-RDA" isalathiso esiphelelwe lixesha izinto zokomoyaezenze ubomi bamaphupha ixesha elide. Umda owahlula iMpuma Jamani kwiNtshona yeJamani, njengophawu lwephupha, ubhekisa kule meko kwinxalenye yokuziphupha, engekaziwa kuye nekungekafiki kuye okwangoku.